Mitemo Gumi Yezve Mapinduriro Aungaita Negative Ongororo Pamhepo | Martech Zone
Kumhanya bhizinesi kunogona kuve kunonetsa kwazvo. Kunyangwe iwe uri kubatsira bhizinesi neshanduko yaro yedhijitari, yakaburitsa nharembozha, inzvimbo yekutengesa, mikana ndeyekuti hausi kuzosangana nezvinotarisirwa nevatengi vako rimwe zuva. Munyika ine hukama neruzhinji ratings uye wongororo, mikana yako yekuwana isina kunaka online ongororo yave pedyo.
Severuzhinji sekunge chiyero chisina kunaka kana ongororo yakaipa inogona kunge iri, zvakakosha kuti iwe uzive kuti mhinduro yako kune iyo yakaipa ratidziro kana ongororo yakakosha - kana isina kunyanya kukosha. Mhinduro yakanaka kune isina kunaka ongororo inogona kutyaira kuremekedza uye kuvimba kune rako bhizinesi. Mabhizimusi emazuva ano nevatengi vanoziva kuti kudyidzana kwebhizimusi rega hakuzove kwakakwana… asi mabudiro anoita bhizinesi kana rikatadza rakakosha.
Ndiri kunyora chinyorwa ichi zvichibva pane yangu anecdotal chiitiko chemaitiro andakaona mabhizinesi achikunda isina kunaka ongororo - ini handisi kuzotaura zvidzidzo kana dhata nekuti ini ndinofunga kuti bhizinesi rega rega rine tsika uye maitiro asingagone kuve inogarwa muboka rehuwandu. Heino yangu runyorwa matipi uye maitiro ekupindura kune isina kunaka ongororo.
Unofanira Kupindura… Pakarepo - Mhinduro yekukasira inodikanwa kupa vamwe vatengi uye mabhizinesi pfungwa yekuti iwe uri kuteerera uye kuti une hanya. Izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kusvetukira kumhedziso, zvakadaro. Dzimwe nguva kupindura kuri kungotaura kuti wanzwa kunyunyuta uye uri kuongorora mamiriro acho ezvinhu uye kuti ungaagadzirisa sei.
Iva Anonzwira Tsitsi - Cherekedza kuti sei ndisina kuti "ratidza" tsitsi? Ino haisi nguva yekunyepedzera kuva nehanya, inguva yekunyatsofunga nezve maonero emutengi kana mutengi anonzwa kuti vakagamuchira basa rakashata. Paunopindura kumunhu uyu, kunyepedzera kunge vangori nezuva rinotyisa kwazvo rehupenyu hwavo. Ini ndakamboita kuti mutungamiri andiudze kuti pese paaiita hurukuro ine chekuita nemushandi iye ainyepedzera mushandi iyeye achingorasikirwa nenhengo yemhuri. Ini ndinofunga izano rakanaka online zvakare.
Iva Nokutenda - Kunyangwe paine chikamu chidiki kwazvo chevanhu kunze uko vangori vasina troll, ruzhinji rwevanhu rwuri kugunun'una pachena nekuti vane hanya nemabatiro awakavaita uye vanovimba kuti hauzviitire vamwe vatengi mune ramangwana. Kuti mumwe munhu atore nguva yekunyora nezvenyaya iri kubhizimusi rako iyo inogona kunge ichikanganisa vanhu vazhinji mhinduro isina mutengo kwauri yekuvandudza bhizinesi rako.
teerera - Kana zvaitarisirwa zvisina kuzadzikiswa, nyatsoteerera kumutengi wako kuti ungavandudza sei maitiro ako emukati. Iwe unogona kushamiswa kuti vangani vatengi vanongoda kuve kuteerera pavanobuda. Dzimwe nguva kungobvunza kuti, "Tingadai takaita sei zvirinani?" zvinogona kutungamira kune imwe inoshamisa mhinduro kune rako bhizinesi rinozovandudza hwakawanda kugutsikana kwevatengi.
Iva Wechokwadi - Hazvishamise kuti vanhu vawedzere mamiriro ezvinhu pavanosiya ongororo isina kunaka. Dzimwe nguva, vanoongorora online vanonyepa zvachose. Zvakanaka kupa mhinduro yechokwadi kune isina kunaka ongororo chero bedzi iwe uchidzivirira kurwisa muongorori chero zvodii. Mamiriro akaomarara, asi haufanire kurega nhema pamusoro pebhizinesi rako dziende.
Tsvaga Resolution - Kutsvaga resolution kwakakosha. Ndakagadzira mari yakakosha mumubatsiri webasa repamba makore mashoma apfuura uye mamiriro ese aive njodzi. Mushure mekunge ndasiya wongororo yakareba online nezvose izvi, muridzi wekambani (uyo anga asingazive nezve mamiriro ezvinhu) akasvika kwandiri pachezvangu ndokubvunza, "Tingaite sei izvi zvive zvakanaka?". Mhinduro yacho yanga isina kukwana, asi ini ndakabvisa iyo yakaipa ongororo mushure mekunge kambani yaisa mari nenguva nesimba kuyedza kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Tora izvo Offline - Kuva negakava neshure online kana kunyangwe kuburikidza neemail hazvisi kuzobatsira bhizinesi rako 'mukurumbira. Tsumo yekare yekuti isu "tinorumbidza pamberi pevanhu, takarurama muchivande" inoshanda mune yakashata yekudzokorora mamiriro. Gara uchimanikidza mukana wekutaura kune mumwe munhu uri mukati kuitira kuti vanzwe kunetseka kwako uye iwe unogona kuvarega vataure kushungurudzika kwavo. Kuverenga zvinyorwa hakupe chikamu chetsitsi mukupindura. Kana muongorori achida kuramba achikurova pamhepo, hazvina kunaka kungopindura kuti gonhi rako rinogara rakavhurika asi iwe unofanirwa kuritora kunze kwenyika.
Isa Chiso Kumhinduro Yako - Hapana munhu anofarira kuteedzera / kunama autoresponse kubva kukambani hombe. Paunonyora mhinduro yako, isa zita rako uye ruzivo rwekuonana kuitira kuti munhu aone kuti pane munhu chaiye anotorwa basa rekugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Iva Muchidimbu - Mhinduro ipfupi inogoneka ndiyo mhinduro yakanakisa kune isina kunaka ongororo online. Tenda munhu wacho, bvuma nyaya yacho, shandira kugadzirisa, uye upe ruzivo rwekufambidzana kuti utore chisarudzo kunze kwenyika. Hapana chikonzero chekunyora ndima uye ndima idzo pasina anozoverenga kana kukoshesa.
Tevedza Up PaPamhepo Pazvinenge Zvakakodzera - Ini ndinowanzoona zvisina kunaka ongororo pamhepo nezve nharembozha dzinoreva mabugs akagadziridzwa mushanduro dzeramangwana. Zvakakosha chose kuzivisa pachena kuti nyaya yagadziriswa uye nekutenda munhu akazvimhan'arira. Iyi haisi iyo nyaya yezvisarudzo zvemunhu… mashandiro eruzhinji kana shanduko yechigadzirwa yakagadzirisa nyaya yevatengi vakawanda. Muongorori haadi kukuona uchiratidzira yavo yemamiriro ekugadzirisa online senzira yekusimudzira bhizinesi rako.
Mutengi HAZVINOGARA Akarurama
Mutengi haasi nguva dzose rudyi. Ini ndinofunga ndicho chimwe chezvirevo zvakaipisisa. Ndamhanyira kune vashoma vashoma chaizvo vatengi muhupenyu hwebhizinesi rangu. Ini ndaigara ndichitsamira pazvokwadi kana zvasvika kune iwo mamiriro uye ndainzvenga mhinduro dzemanzwiro kana kupomerwa. Kunyanya kana zvasvika kune vashandi vangu avo vakanyatsoenda pamusoro nekupfuura mukuyedza kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu.
Ini zvirinani kuchengeta uye kudzivirira mushandi akanaka pane kurasikirwa nemutengi akaipa akanyepa nezve mamiriro.
Imwe resitorendi yandaishanda nayo yaive nekufungidzira, kusazivikanwa, kuongororwa kwakashata kwakataura pamusoro pezvikafu zvavasina kana kupa. Ivo vakapindura chaizvo kune ongororo uku vachidzivirira chero kusangana neakaongorora online.
USAMBOPA Kurwisa Muongorori
Usambofa wakarwisa kana kuomerera kuti muongorori wako arikunyepa kana kupinda mugakava nemuongorori online. Kupindura kuongororwa kwakaipa nekuwedzera kusagadzikana inzira-yemoto yekuviga bhizinesi rako mukurumbira sebhizimisi rine hanya, rinonzwira tsitsi, uye rinonzwisisika. Zvakanaka kudzivirira manyepo akanangana nezve bhizinesi rako nekushandisa chokwadi ... asi usambofa wakamborwisa muongorori kana kuomerera kuti vakakanganisa. Kushevedza mutengi akakubhadhara murevi wenhema online hakuzombofambisa bhizinesi rakawanda nenzira yako.
Mienzaniso yeNegative Ongororo Mhinduro
Ini ndaida kupa mimwe mienzaniso yezvisina kunaka ongororo mhinduro dzinogona kukubatsira iwe mukugadzira mhinduro yakakodzera iyo inokubatsira iwe kugadzirisa rako rese mukurumbira pamhepo. Heano mamwe mamiriro ezvinhu:
Kuongorora Kwakashata Iwe Unofanira Kutsvaga Zvimwe
[Zita], maita basa nekuunza izvi kwatiri. Tinotora mhinduro dzevatengi vedu zvakanyanya uye tinogara tichida kudarika zvinotarisirwa. Tiri kuongorora nyaya iyi uye vashandi vedu vachange vachikurukura mukati memazuva maviri anotevera ebhizinesi. Tinogona kufarira kunzwa zvakawanda nezve iyi mamiriro uye tinokoshesa mhinduro yako. Zvingave zvakanaka here kana tikataurirana newe nefoni? Inzwa wakasununguka kunditumira meseji [Zita Rangu] kana kufonera kuwedzera kwangu [X] pa [Nhamba yeNhare].
Ongororo Isingazivikanwe Negative
Ndinokutendai nekuunza izvi kwatiri. Tinotora mhinduro dzevatengi vedu zvakanyanya uye tinogara tichida kudarika zvinotarisirwa. Tinogona kufarira kunzwa kubva kwauri kuti udzidze zvakawanda nezve iyi mamiriro. Zvingave zvakanaka here kana tikataurirana newe nefoni? Inzwa wakasununguka kunditumira meseji [Zita Rangu] kana kufonera kuwedzera kwangu [X] pa [Nhamba yeNhare].
[Zita], isu hatipe icho chigadzirwa. Iwe unogona ndapota kundibata [Zita Rangu] kana kufonera kuwedzera kwangu [X] pa [Foni Nhamba] kuti tigone kuwana rumwe ruzivo nezve iyi mamiriro?
Ongororo Yechokwadi Yakashata
[Zita], maita basa nekuunza izvi kwatiri. Isu tinogara tichida kudarika zvinotarisirwa nevatengi uye izvi zvinoita semukana mukuru kwatiri kuti tidaro. Tinoda kutaura newe pachako kuti tiite izvi kwauri nekuti bhizinesi rako rakakosha kwatiri. Zvingave zvakanaka here kana tikataurirana newe nefoni? Inzwa wakasununguka kunditumira meseji [Zita Rangu] kana kufonera kuwedzera kwangu [X] pa [Nhamba yeNhare].
Muongorori Akashata Anoramba Achienda
[Zita], zvinosuwisa, kusvikira tataura newe pachezvako kuti tiongorore mamiriro ezvinhu aya, hatizokwanise kugadzirisa mamiriro ezvinhu pano. Ndokumbira utungamire meseji kwandiri [Zita Rangu] kana kufonera kuwedzera kwangu [X] pa [Nhamba yeNhare].
Maitiro Akagadziriswa Kubva Kuongororo Yakashata
[Zita], ndinokutendai zvikuru nekuunza nyaya iyi kwatiri uye kushandisa nguva nesu kugadzirisa nyaya yacho. SeFYI kune chero munhu anotevera nyaya iyi online, isu takagadzirisa chigadzirwa / maitiro edu uye tikabvisa iyi nyaya kubva [zuva].
Zvakanaka Kurega Pane Ongororo Yakashata
Dzimwe nguva bhizinesi rekuita haringoshandi. Unogona kuyedza zvese kugadzirisa ongororo isina kunaka uye zvingasazoguma nemhando ipi neipi yesarudzo inoita kuti mutengi achinje nzira kana kubvisa ongororo. Zvichaitika.
Chero bedzi vatengi nemabhizimusi vachiona kuti waita zvese musimba rako kuyedza kugadzirisa mamiriro ezvinhu akatungamira kune yakashata ongororo, ivo vanokupa iwe mukana wekusahadzika.
Mhinduro Yakanakisisa Kuongororo Dzakashata ndeye ZVIMWE ZVAKANAKA Ongororo
Kana bhizinesi rako richirwira mashoma maongororo asina kunaka ayo asingazopere, mushonga wakanakisa kukumbira vatengi vanofara nekuvasunda kuti vape wongororo inopenya yekambani yako. Nepo vatengi vazhinji vachisvetukira kuverenga kuverenga kwakashata (ini ndinoita), hapana mubvunzo kuti huwandu hukuru hwewongororo huru huchava nemhedzisiro pamaonero avo ezita rako.
Uye, hongu, kuona mhinduro inofungidzirwa kune yega yega kuongororwa kwakaipa kwawakaedza kusvika pakugadzirisa kunobatsira zvakanyanya!
Tags: sei kutiongororo yakaipa onlineisina kunaka ongororo mhindurowongororo dzisina kunakaOngororo dzepamhepoReviews